DUULLI MINILIK UMMATA OROMOOTTI BAHE KAN GITAA MOO WEERARAA TI? – Bilisummaa
Gaaffiin armaa olii baroota walakkaa jahaatamootaa Oromoota (sab-boonotaa fii qabsaawoota) fii, hortee nafxanyootaa (Amaara) jiddutti, biyyaa fii alattiis, atakaroo cimtuu turte. Maayyiirratti, Oromoota marsaalee qu’annaa fii dhaabota maqaa Xoophiyaa tiin dhaabbatan keeysaa, takkaa-lamaan yaaftee, bara 1976 keeysa, biyyatti Adda Bilisummaa Oromoo, Awrooppatti Tokkummaa Barattoota Oromoo Awrooppaa, Ameerikaa Kaabaatti Tokkummaa Oromoota Ameerikaa Bitaa dhaabbachiifte. Tarkaanfiin gaafas Oromoota jibiriin dammaqiinsa murannoo cimtuun dabaalamteen fudhatamte, suuta-suuta onnee xiqqaa fii guddaa sabaa fudhattee, wareegama qaaliin diinoota isii kan keeysaa fii alaa injifattee, arra, Oromiyaa hortee, hamma hafee fiif hiixachaa jirti.
Oromoon kophaa jaaramee qabsaawuu wanni fide jibba Amaara ykn saba biraa waliin jiraachuu tii miti. Jaalala kophaa jiraachuu tiis miti. Tan bilisummaa irreen dhabe deeffachuu ti. Tan gabrummaa jalaa bahee, bilisa tahee, abbaa biyyummaa isaa mirkaneefatee, Oromiyaa bilisa taate keeysatti walabummaan jiraachuu ti.
Hawaasni tokko kan humna irra qabuun weeraramee diina jalatti caphuun Oromoon hin jalqabamne. Roomaan Ingiliz weeraree, cabsee, kan dura dhaabbatu daamacee, amata dhibba afur gabrummaa isaa jalatti bulche. Minilikiis akkuma sanitti, ummata Oromoo kan heera Gadaa tiin wal bulchaa ture, duula baroota hedduu walitti dhaabbateen lubbuu toora 5,000,000-i gatee, cabsee, bulchiinsa isaa jala naqe. San boodaas, nafxanyoota keeysa qubachiisee, irratti muudee, warra itti fincilan hila malee adabuuf tuutaan hallayyatti haree, reeyfa karaa gubbatti rarraasee, dhiira harka ciree, dhalaa harma muree irratti if muude. Akkasiin, lammii,
“Walde-Gabreen Amaaraa kan mataa bututtuu
Amaaraan gooftaa janna sakaraata lubbuu
Abookaroo qubatee, Goondar miraaza saa tii
Nu caph’nee kufnee, ol-qabaan gama saa tii” jachisiise.
Duuba, namicha yakka armaa olii tii fii kanneen himanaaf coraa nama sookanneeysan Oromoorratti hojjate, dura taa’aan ODP/OPDO akka muudameen faarsutti seene. Gaafana, Oromoon dhagayee akka hin dhagayiniitti callise. Dhiifamaa waliin, “gaafa Sheekhni dhuufu darasaan ni albaati” ja’ama. Akkasiin, faaruun muudamarraa kaate itti fuftee, dheengadda, Ambotti, Aanolee lagachiise. Ergamaa Minilik, Goobanaa, faarsise. Sanirratti, laalcha seenaa tan hortee nafxanootaa waliin wal simachiisuuf, qabsoo diddaa weeraraa godhamte tan gitaa jachisiise.
Hortee nafxanyootaa tii fii Amaarri kaaniis seenaa weerarama Oromoo haaluun sababa irraa maddu qaba. Isaan keeysaa angafni, seenaa biyyattii tan isaan baroota kumaan himatanii fii ittiin boonan waan duraa sheekkeeysuu fi. Kan lamadaa, hegeree biyyattii tii fii tan isaanii waan duraa dukkaneeysuu fi. Inni sadaffaa, gumaa Oromoon gaafachuuf jiraattu jalaa if dahuu fi.
Duuba isaan kanaaf haa godhanii, ODP/OPDO-n hoo maalif hafarsitiif yo ja’ame, deebisaan, goolabbiitti, tuffii ummata Oromoo tiif qabani. Tuunni baroota 28-tiif Tigreef sujuudaa bahan, garaaf jecha lammii gataa, araraasaa turan, eega dhiiga qeeyroo tiin gimgamaan adda bahanii aangoo dhugaa helan, if irraanfatanii, odoo dhiiyni diinaa waliin dhagalaasaa bahan hin qoorin, malaaykummaa horanii, Rabbiin “Aboo!” jachaa jiran. Kan kana fide, hawaasni Oromoo kan xiiqii hin beeyne, kan dhiifamaaf arifatu, miidhaa irraan gayan liqimsee, akka ilmi irraa bade deebi’eefitti, qoma isaa waan benee fi.
Jarri gadaa isaanii fixatan, aangoo yaroo gabaabduu keessatti a’oo seente mi’eeyfatanii, amaanaa ummanni “isinitti kennine” ja’uun qoosatti fudhatanii, baroota hedduu irra turuuf karoorfachaa jiru. Tarsiimoo kanaa tii fiis, Habashaa aadaa qubaan wal-bulchuu hin beeyne, tan dimokraasii fii feedraalizimiin dhugaa faallaa fedhii isaanii tahuu hubatan waliin surgisa shiraa hidhatanii, afaaniin Sheekh Husseen jechaa lukaan gama Gabreelii deemaa jiru. Akkuma lakkooysa ummataa kan yaroon isaa yaayyu tare dabarsanitti, xiqqo booda, filmaata afaaniin dhawwaaqaniis “irraanfadhaa” jachuun isaanii boru.
Qeeyroo itti hin callisin!
Previous Arsii; Addisuun Dachee Oromiyaa keessa imaluuf hamilee hin qabu!
Onkololeeysa 15, 2018 Abbaa Urjii tiin: Arra, wal’aansoon dheertuu fii hadhooytuun qabsoo bilisummaa ummata …